Pasi penyika yepurasitiki inodzokorodza hupfumi, yakagadzikana kupakata hunyanzvi hwave iko kutungamira kwevakawanda kuedza kweiyi indasitiri. Yakaburitswa kutanga kwa2020 iyo yekuGerman yekupakata mubairo, hunyanzvi kurongedza kwekusimudzira budiriro ndeimwe yenyaya yakatarisa. Iye zvino tarisa iyo yeGerman yekupakata mubairo wakasarudza yakagadzika yekurongedza hutsva hwerudzii
Hapana glue, hapana mimeograph PE firimu zviri nyore kudzokororwazve
Wipak inoburitsa "Green Haven" yemidziyo sausage kurongedza, zvese zviri zviviri kugadzirisazve, yakakwira yekudzivirira uye yakakwira kugadzirwa kwehunyanzvi zvakanakira. Rutsva mhando yevhavha kurongedza nezvidimbu zviviri zvisina zvinonamatira, hapana kudhinda kwe PE firimu, ichiumba chinhu chimwe chete. Kuteedzera kwakabatanidza iyo Digimarc bar kodhi, unogona kushandisa chero chishandiso chakangwara kuti uone nekukurumidza, izvi zvinoita kuti vatengi vawane kugadzirwa kwechigadzirwa uye data rezvehutano, kurongedza kuri pachena. Mushure mehupenyu hwebasa rekupaka magumo zvakare anokwanisa kupinda mukati marara nzvimbo.
Green Haven kurongedza zvakare vane mushure meFSC chitupa chepepa tepi, inogona kupatsanurwa nyore nemuviri wepurasitiki. Nemhaka yezvinhu zvepurasitiki zvisina mimeograph, zvishandiswazve zvinogona kuverengera mhando yezvinhu padanho repamusoro.Iyo kambani yakati, semhedzisiro, 90% ye PE chinhu chimwe chete, chiri nyore kushandisa uye kudzokororazve kwepakeji firimu kwakadzora huwandu hwese hwekabhoni kusvika 30%
02 ine 25% PCR! Iyo nyowani bhenji yekutambanudza firimu munda
DUO PASI 4 Tambanudza firimu rakatumirwa naDUO PLAST AG, Wedzera kanenge 25% yezvinhu zvakagadzirwazve （PCR） kune iyo yakatambanudzwa firimu fomati, Iko hakuna kukanganisa mukuita. Juri rinofunga kuti rakashandiswazve zvinhu zvinoshandiswa mumunda weiyo yakatambanudzwa firimu ine seta bhenji nyowani, panguva imwe chete inosangana nezvinodiwa zveyakanakisa kubereka kugona. Firimu ukobvu inongova chete 8 um, yakanyanya hupfumi, panguva imwechete ine yakanakisa kutakura-kutakura kugona. Firimu EDGE iri nyore kushandisa, uye patent DUO DOUBLE EDGE tekinoroji dziviriro.
Yakakwirira chipingamupinyi, bvisa makumi matanhatu muzana epurasitiki imwe nyama yekuisa tireyi
Sudpack Yakachena - Line Sisitimu iri mhando yakatetepa firimu mhinduro, kuvandudza kwayo uye inovavarira kune inowanzo shandiswa tireyi Sisitimu kupinda inogadziriswazve PP bhegi, plastiki inoshandiswa panguva imwechete inogona kudzikiswa ne60%. Iyo firimu inogona kusangana neakakwira kupatsanurwa anodiwa nyowani nyama pie. Paisazove nekudikanwa kwevazhinji vashandisi kuti vashandise iyo firimu yekupakata tireyi, asi iyo bhaisikopo roll yakatumirwa kune vagadziri venyama, uye yakarongedzwa nyama payi uye zvimwe mwenje. Pamusoro pekuchengetedza zvinhu zvekupakata, asi zvakare zvinogona kuchengetedza zvimwe zvigadzirwa uye kudzikisa kabhoni tsoka.
Ultra-yakatetepa kupfeka kwechinhu chimwe chete, compostable kurongedza panzvimbo yemazhinji-masiraji kurongedza
Fraunhofer ISC ORMOCER yekumhanyisa kuvandudza, pamwe neiyo hwaro hwezvigadzirwa, biodegradable BioORMOCER kupfeka, ine simba uye yakatetepa, inongori 1-3 um ukobvu. Kudzivirira kuita kweaya machira sekupihwa neiyo multilayer chimiro chekuvharira kuita. Multi-function ORMOCER kana BioORMOCER kupfeka inogona kushandiswa kuchikafu kana mushonga kurongedza zvakadzokorwazve polymer chinhu chimwe, kana kushandiswa kwezvinhu zvinogadzirwa zvakapfava.
Iyo bio-yakavakirwa kurongedza nhasi kazhinji oksijeni chipingaidzo chivakwa chakanaka, hydrogen gasi chipinganidzo chivakwa chakadzikira, nepo bioORMOCER kupfeka ine yakanakisa isina mvura, okisijeni uye hwema hwekutadzisa mhedzisiro, izvo zvinoita iyo polymer, yakazvarwa "base kana biodegradable polymer inogona kusangana nekudikanwa kwechikafu kana mushonga kurongedza kuvharira kuita. Uchishandisa rudzi urwu rwekunamatira kwepamusoro chinodzivirira chivakwa, chinhu chimwe chinogadziriswazve, zvinhu zvinogadzirwa zvinogona kutsiva zvakapetwa zvakapetwa-siyana.
100% PCR inogona kusuka zvinhu zvemagetsi
HERMA Polifilm uye schafer - etiketten mushandirapamwe wakagadziridzwa ne100% PCR inogona kusuka zvinhu zvemagetsi. Label inoumbwa ne PE membrane, iyo polymer kurongeka ndeye 100% yemutengi, mushure mezvinhu zvakadzokororwa, kunyangwe masterbatch iri PCR - PE, chena chitaridzi firimu dhizaini inoita kuti zvive nyore kwazvo kushandisa mulberry kudhinda, offset kudhinda, kudhinda kwedhijitari uye skrini kudhinda uye zvimwe zvakajairika kudhinda maitiro ekudhinda.
HERMA 62 RPW yekushandisa mabhanhire ndeyemhando yemhando yekunamatira, inogona kunge yakadzika se70- yakadzika tembiricha uye kusangana kweiyo caustic yekudzokorora nzira yekubvisa uye hakuzove nemasara. Uye kutengesa kwekushambidza zvinonamatira pamusika kazhinji kunongova panenge makumi masere kana makumi matatu kana kuti tembiricha inogona kubviswa.
Bvisa chitaridzi, mabhodhoro e100 akadzokororwa ePET
NaKrones AG kuvaka mabhodhoro matsva akagadzirwa kubva ku100% akagadziriswazve PET, inogona kudzokororwa zvachose mushure mekushandisa. Pamusoro pehombodo yakaoma kudzokorodza chitaridzi, shandisa yekushongedza yedhijitari, yekudhinda inki inogona kushandiswazveYakanyungudutswa mu cheng, haina kusiya masara, izvo zvinoreva kuti bhodhoro zvinhu zvinogona kushandiswa zvakare mumashure muhupenyu kutenderera kune kurongedza chikafu. Bhodhoro rine kana mubhodhoro rebhokisi, mushure mekuvhura butiro richiri pabhodhoro, zvinoenderana nezvinodiwa eu rairo 2019/904.
Iyo yekusimudzira bhodhoro pfungwa zvakare inoratidzira rukudzo rwakagadzirwa mubhodhoro, senge hwaro hweatatu dhizaini ndiyo yekudzokorora chiratidzo chechimiro chepasi rose chinozivikanwa sekurudziro; Saizvozvo, hombodo yehombodo zvakare ine matatu akapoterwa katatu nzvimbo, bhodhoro uye chikamu chekubatana chemuviri, akadaro dhizaini iyi muPET bhodhoro, zvisingawanzoitika.
Iyo yeGerman Packaging mubairo (ChiGerman Packaging Mubairo) neGerman Packaging Institute (yeGerman Packaging Institute ev dvi), uye nemasangano ehurumende yeGerman, hurumende yehurumende yezvehupfumi nenyaya yedhipatimendi rezvemagetsi, inoonekwa seimwe yeEuropean Packaging mibayiro yepamusoro yechikamu.